Xaashi Oo Mar Kale Hanaan Doorasho Soo Saaray Farmaajana Canaantay – Heemaal News Network
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Guddoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay nasiib darro tahay in madaxda dowladda federaalku ay weli dhegaha ka fureysanayaan baaqa iyo rabitaanka mas’uuliyiinta gobollada waqooyi ee ku aadan hanaanka loo marayo doorashada xildhibaanada ku metelaya baarlanmaanka afarta sano ee soo socota.
Sidoo kale qoraalkan ayaa lagu dhaleeceeyey in xukuumaddu ay ku sii dhiirantahay tababaridda guddi aan sharci lagu soo magacaabin, isla markaana la doonayo in doorashada lagu boobo.
“Guddoomiyaha Aqalka Sare, siyaasiyiinta, dhaqanka iyo waxgaradka beelaha gobollada waqooyi, waxay aad uga xunyihiin, in hoggaanka sare ee dalka iska indha tirayo ilaalinta sharciga iyo hanaanka lagu heshiiyey ee loo dejiyey doorashada dalka.”
“Waxaa nasiib darro ah in xukuumaddu weli ku adkeysaneyso oo ay tababareyso guddi sharci darro ah, iyadoo u jeedku yahay inay qabtaan doorasho ku saleysan boob iyo musuq maasuq” ayaa lagu yiri warkan oo ka soo baxay xubnaha DF ku metelaya Somaliland oo uu ugu horeeyo guddoomiye Cabdi Xaashi.
Guddiga Doorasahada Soomaliya Diiwaanadii Dorashada U Diray Goboladda